Multi Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
NFT Hydroponic စနစ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်ရုပ်ရှင် > Multi Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသီးနှံများအတွက် Ebb And Flow Nft Hydroponic System
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက် Ducth Bucket Substrate Hydroponics
ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးအတွက် Coco Peat Bag အလွှာ Hydroponics
စတော်ဘယ်ရီဆလတ်အဘို့အအလွှာ Hydroponics မှတဆင့် A-type အမျိုးအစားစိုက်ခင်းမြောင်း groove
Multi span film greenhouse သည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအပူပိုင်းစက်မှုဇုန်ဖန်လုံအိမ်ဖြစ်ပြီးဖန်လုံအိမ်နှင့် polycarbonate sheet greenhouse ထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ ဒေသတွင်းလေ၊ နှင်း၊ မိုးရေ၊ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆစသည့်ဒေသဆိုင်ရာရာသီဥတုအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖန်လုံအိမ်၏ဖန်လုံအိမ်ဒီဇိုင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Standard” ထုတ်ကုန်ကိုရောင်းချရန်မလိုပါ၊ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖန်လုံအိမ်အားလုံးကိုသင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဖန်လုံအိမ်ကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်၏ဖန်လုံအိမ်သည်လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
Multi span film greenhouse သည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအပူပိုင်းစက်မှုဇုန်ဖန်လုံအိမ်ဖြစ်ပြီးဖန်လုံအိမ်နှင့် polycarbonate sheet greenhouse ထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။ ထို site မှာပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်တပ်ဆင်။
Multi-span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်ဒီဇိုင်းသည်လေ၊ နှင်း၊ မိုးရေ၊ မိုးရေချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Standard” ထုတ်ကုန်ကိုရောင်းချရန်မလိုပါ၊ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖန်လုံအိမ်အားလုံးကိုသင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဖန်လုံအိမ်ကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်၏ဖန်လုံအိမ်သည်လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
Saw Tooth multi span ဖန်လုံအိမ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အမြဲတမ်းနေရာနှင့်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အမြဲနေရာယူထားသည်။ ဆီးနှင်း ၀ င်မှုသည်အချက်မဟုတ်သောအပူပိုင်းဒေသနှင့်အပူပိုင်းဒေသတို့တွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ယခုလေဝင်လေထွက်သည်ပူနွေးသောgrowရိယာစိုက်ပျိုးသူများ၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လာသည်နှင့်ငါတို့နှစ်ဖက်စလုံး၊ အဆုံးများနှင့်မပါဝင်ဘဲဘေးချင်းနံရံအမျိုးမျိုးဖြင့်စောသွားများကို ထပ်မံ၍ ထပ်မံကမ်းလှမ်းသည်။
ဤ sawtooth ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သည်သဲကန္တာရဒေသများနှင့်အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုတို့တွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ Sawtooth ဖန်လုံအိမ်များကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုမြောင်းချိတ်ထားသောဖန်လုံအိမ်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနေရာတွင်တည်ဆောက်သည်။
multi span greenhouse ဖန်လုံအိမ်၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
8 မီတာ, စိတ်ကြိုက်
အဓိကမဏ္Pိုင်: 50 * 100 * 2.0mm
အရန်တိုင်: 50 * 50 * 2.0mm
Arch ပိုက်: choose32 / Î¦25 ရွေးချယ်မှုများအတွက်
150 microns, 200microns ကိုရွေးချယ်ပါ
4.8 / 5.8m / 6.8m
0.35-0.5kn / m2
0.25-0.4kn / m2
140mm / h
ဘေးထွက်လေဝင်လေထွက်၊ ဆည်မြောင်းစနစ်၊ အပူပေးစနစ်၊ အအေးပေးစနစ်၊
စတော်ဘယ်ရီ၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောက်ပဲသီးနှံများ၊
3.Product Feature And လျှောက်လွှာ
Multi span film greenhouse ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ ငရုတ်ကောင်းများ၊ သခွားသီးများ၊ ဖရဲသီးများ၊ ပန်းများနှင်းဆီပန်းများ၊
တစ် ဦး ကဘောင်မြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည်
Multi span film ဖန်လုံအိမ်သည်အလွန်မြင့်မားသောဘေးနံရံများနှင့်ပိုမိုပွင့်လင်းသောလေဝင်လေထွက်သို့သူ့ဟာသူချေးငှားသည်။Multi span Greenhouse သည်နိမ့်နိမ့်နိမ့်နိမ့်နိမ့်သံကွင်းဖြစ်သည် အပူပေးလေသည်အပင်များမှအမိုးစောင်းကိုတက်စေသည်။ ဒေါင်လိုက်ခေါင်မိုးအပိုင်းကိုထိန်သိမ်းခြင်း၊ အကာအရံပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်နံရံကိုလှိမ့်ခြင်းတို့ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Windward ဘေးနံရံတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်ထားသောနံရံများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ ၀ င်လေအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သောလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။ဤသည် multi span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေတိုက်နှုန်းနှင့်နှင်းထူထပ်သောareaရိယာများအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အပူ dip dip galvanized သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး UV Anti-aging film ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
က) Multi span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အများအပြားရှိသည်:
- ဖန်လုံအိမ်အမျိုးအစားအားလုံးတွင်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တပ်ဆင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
- သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ၂၇၅ ဂရမ် / ၂ ပါ ၀ င်သောအပူ၊ သွပ်အစိုခံသံမဏိကိုယ်ထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ခိုင်ခံ့သောမာကျောမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောစွဲကပ်မှု၊ အနှစ် (၂၀) ​​သက်တမ်းအသုံးပြုခြင်း၊
Bï¼‰ Multi span film ဖန်လုံအိမ်ဖုံးအုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းသည်ရှင်းလင်းသော PO film ဖြစ်ပြီးထင်ရှားကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းအား (၅) နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးအာမခံချက်ရှိသည်။ 150 မိုက်ခရိုနှင့် 200 မိုက်ခရိုရေပန်းစားသည်။ အရောင်အဖြူနှင့်အပြာရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်။
) ၀ ယ်ယူသူများအတွက် span film ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသောစနစ်များသည်ဒေသအခြေအနေနှင့်မည်သည့်ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးမှုအပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရမည်။
# လေဝင်လေထွက်စနစ်တွင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးဘေးထွက်လေဝင်လေထွက်ရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်သည်လေဝင်လေထွက်စနစ်၏အဖွင့်အပိတ်ကိုနားလည်ရန်လက်စွဲသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ရုပ်ရှင် roller ၏ထိန်းချုပ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
# အအေးပေးသည့်စနစ်အအေးပန်ကာနှင့်အအေးပါသောရေသည်ရေငွေ့ပျံခြင်းနိယာမကို အသုံးပြု၍ အအေးခံရန်ရည်ရွယ်သည်။
# အပူပေးစနစ်တွင်အဓိကအားဖြင့်ဘွိုင်လာများနှင့်ရေဒီယိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာ၊ ဒီဇယ်ဘွိုင်လာနှင့်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာများပါဝင်သည်။ ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးသောပိုက်၊ ရေပူရေအေးစနစ်အတွက်အပူပေးစက်၊ အပူပေးကွိုင်ပန်ကာ၊ အပြင်အပူပေးစက်နှင့်အပူပေးစက်သုံးကိရိယာစသည်တို့ပါရှိသည်။
# အပြင်ဘက် shading စနစ်။
ပစ္စည်း - စက်ဝိုင်းလည်ပတ်နေသည့်ပိုးထည်ကုလားကာလုပ်ဆောင်မှု။ ပြင်ပအရိပ်များစနစ်သည်အလင်းပြင်းထန်မှုကိုညှိခြင်းဖြင့်ဖန်လုံအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဖန်လုံအိမ်သည်နေရောင်ခြည်ကိုထိတွေ့သောအခါနေရောင်ခြည်အများစုကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရန် အားကြီးသောအလင်းပြီးနောက်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုမီးရှို့ရှောင်ရှားရန်, ဖန်လုံအိမ်။
ပစ္စည်း: လူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့် polyester ယက်။ လုပ်ဆောင်ချက် - အပူချိန်ကိုလျှော့ချပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ရေသွင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာပေးခြင်းစနစ်သည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤအတောအတွင်းသီးနှံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ၂။ အထူးသဖြင့်ရေအရည်အသွေးမကောင်းသောသီးနှံနှင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသည့်forရိယာအတွက်သင့်တော်သည်။ ၃။ အဆင့်မြင့်ကုသမှုကိုဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆည်မြောင်းစနစ်ကိုအဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။
Multi-span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ် SGS လက်မှတ်နှင့်အတူကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အတူ
Multi-span film ဖန်လုံအိမ်အမြောက်အများကိုကွန်တိန်နာဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အချိန်မီဖြန့်ဝေသည်။
Jianda Greenhouse ကုမ္ပဏီမှ multi span film ဖန်လုံအိမ်သည်လာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စုံစမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
သင့်လျော်သောဖန်လုံအိမ်ဒီဇိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့်အတူ၊ ပြီးပြည့်စုံသော After-sale service နှင့်စက်ရုံကိုသင့်အတွက်ယခုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း!
A.We သည် ၁၀ နှစ်ကြာပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်သို့တင်ပို့ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရခြင်း နှစ်ရှည်အကျိုးစီးပွားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
A. ကုန်ပစ္စည်းများသည်၎င်းတို့၏အမည်၊ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပုံးထဲထည့်ပြီးပိုက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ကွန်တိန်နာသို့တိုက်ရိုက်တင်သည် (ကုန်သေတ္တာတစ်ခုလုံး ၀ ယ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ကွန်တိန်နာကိုဆွဲယူနိုင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုကောင်းစွာတင်နိုင်သည်။
B. ပို့ဆောင်ခြင်းဆိပ်ကမ်းသည်များသောအားဖြင့် Qingdao ဖြစ်ပါသည်။ သင့်လျော်ကြေးကိုရရှိပြီးနောက်သင့်အတွက်သင်္ဘောကိုစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Insulation Blanket နှင့်စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ်
Sawtooth အမျိုးအစား Multi Span ရုပ်ရှင် Greenhousue
နှစ်ထပ်အလွှာ Arch အမျိုးအစား Multi Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
စပိန်သည်ခေါင်မိုးပြတင်းပေါက် Multi Span Film Greenhouse ရိုက်ပါ
တစ်ခုတည်းအလွှာ Arch အမျိုးအစား Multi Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ leavသင့်ထံအီးမေးလ်ပို့ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်လိမ့်မည်။
လိပ်စာ: Huanglou Twon Qingzhou City, Shandong Province, China
မူပိုင်ခွင့်© 2020 WEIFANG JIANDA GREENHOUSE MATERIAL CO ။ , LTD ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။